Wararka - Shan Arrimood oo Waaweyn oo Saameeya Nolosha Hawlgalka ee Slip Ring
Giraanta silbashadu waa isku-duubni wareeg ah oo loo isticmaali jiray in lagu bixiyo isku-xirka korantada meel aan joogsi lahayn ilaa goob meerto ah, waxay hagaajin kartaa waxqabadka farsamada, fududeyn kartaa hawlgalka nidaamka iyo baabi'inta fiilooyinka waxyeellada u leh ee ka laalaada goysyada guurguura. Xargaha silbashada ayaa si weyn loogu adeegsadaa hababka kaamirooyinka anteenada gacanta, gacmaha robotic, seminarerada, miisaska rogaya, ROV-yada, iskaanka CT-ga caafimaadka, nidaamyada anteenooyinka raadaarka iwm.
1.Qaabdhismeedka guud ee giraanta silbiska
Iyada oo ay ugu wacan tahay nidaamka dhabta ah ee macaamilka, kordhinta iyo shuruudaha miisaaniyadda, waxaan ku siin karnaa giraan -gacmeedyada kaabsal -ka -yar, iyada oo loo marayo siddooyinkii daloolka daloolka, siddooyinkii warqadda kala -baxa, siddooyinkii kala -baxa ee kala -duwan iwm, laakiin iyada oo loo marayo siddooyinkii daloolka daloolka iyo soo -saareyaashoodii waxay leeyihiin hawlgallo aad u dheer cimriga faa'iidooyinka dhismaha.
2.Qalabka giraanta silbiska
Soo gudbinta korontada ee giraanta siibku waa iyada oo la isku maroojiyo giraanta wareegga ah iyo burushyada taagan, sidaa darteed faraantiga iyo alaabta burushku waxay si toos ah u saamayn doonaan cimriga hawlgalka ee giraanta sibidhka. Burushyada daawaha badan ayaa inta badan loo adeegsadaa wax soo saarka sababtuna tahay karti-iska-caabbinta xirashada oo aad u fiican. Alaabta dahaarka oo tayo sare leh aad bay muhiim u tahay.
3. Giraanta silsiladda ka shaqaynta iyo isku -dubaridka
Muddada dheer ee giraanta silsiladdu si habsami leh u shaqayso waa natiijada dhammaan qaybaha isku -duwidda ceelasha, sidaa darteed soo -saaraha giraanta sibidhku wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo in qayb kasta si habboon loo farsameeyo loona ururiyo. Tusaale ahaan, siddooyin dahab ah oo tayo sare leh iyo buraashyo waxay yeelan doonaan khilaaf yar oo wareeg ah waxayna kordhin doonaan cimrigiisa, isku -dubaridka xirfadda leh wuxuu hagaajin doonaa isku -dheelitirka giraanta siibashada, xoogga dielectric, iska -caabbinta dahaarka, buuqa korantada iyo sidoo kale nolosha.
4.Xawliga hawlgalka ee giraanta siibashada
Giraanta siibitaanka lafteedu ma wareegto oo waxay leedahay xagal aad u yar, waxaa loo kaxeeyaa inay ku wareegto aaladda farsamada sida mootada ama usha. Xawaareheeda hawlgalku wuxuu u baahan yahay inuu ka yar yahay xawaaraha ugu sarreeya ee loogu talagalay, haddii kale noloshiisu waa la soo gaabin doonaa. Sida caadiga ah si dhaqso leh ayuu u shaqeeyaa, xirashada burushyada iyo giraanta si dhakhso ah waxayna saamayn doontaa noloshiisa hawlgalka.
5.Dawladda hawlgalka ee giraanta silbiska
Markuu macmiilku iibsado siddooyin siib ah, bixiyaha giraanta siibku waa inuu sidoo kale weyddiiyaa bay'ada hawlgalka ee giraanta siilka. Haddii giraanta siibitaanka loo adeegsan doono bannaanka, biyaha hoostooda, badda ama deegaanno kale oo khaas ah, waxaan u baahanahay inaan hagaajinno ilaalinta giraanta siibinta ama aan beddelno agabyada si aan ugu oggolaano inay ku habboonaan karto deegaanka. Sida caadiga ah AOOD siddooyinku waxay ku shaqayn karaan 5 ~ 10 sano iyada oo dayactirku bilaash yahay marka loo eego jawiga shaqada ee caadiga ah, laakiin haddii uu ku jiro heerkul sare, cadaadis sare ama jawi gaar ah oo daxalka ah, cimrigiisa hawlgalka waa la soo gaabin doonaa.